musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiPutukezi Vatambi Bernardo Silva Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname;'Little Messi'. Our Bernardo Silva Childhood Story Nhoroondo ye Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezveBristardo Silva's advanced playmaking skills asi vashomanana vanofunga upenyu hwake kunze kwemukati iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzerwa kwesei, rega kutanga.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva akaberekwa musi we 10th waAugust, 1994 mu Lisbon, Portugal kuna Mota Veiga Silva (baba) naMaria João Silva (amai).
Somukomana muduku, akakurira achitsigira Benfica. Akanga ari chinhu chakajeka chidiki neIQ yakakwirira. Maitiro ake nebasa rakaoma raiva mutsara wekuti ari kupi nhasi mumutambo wenhabvu.
Akatanga basa rake rebhora semakore masere uye akazofambira mberi kuburikidza nehurongwa hwevechiduku asati aita kutanga kwake kwaBenfica B muchechi wechipiri wePortugal muChina. Bernardo Akanzi Nezita 'Messizinho ' uye 'Little Messi' nekuda kwehutano hwake hukuru.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Jorge Mendes ndiye Agent wake
Bernardo muchengeti wepasi rose akaramba Jorge Paulo Agostinho Mendes. Mendes ari mumwe wevatungamiri vebhokisi rehutano munyika, uye nevatengi vanosanganisira Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, Marcos Rojo na José Mourinho. Anowanzotaurwa nezvake se "Super-agent".
Akatumidzwa zita rake Mutevedzeri Akanakisisa wegore paGlobe Soccer Awards zvitanhatu zvinotevera, kubva ku2010 kusvika ku2015. Mendes akatanga semutambo asi akamanikidzwa kusiya tsika dzake dzebasa pashure pokunge arambwa nemakwikwi akawanda echiPutukezi paakanga ari mukutanga kwe20s. Pane kudaro, akakurudzira vhidhiyo yekuchengetedza zvekugadzira, akashanda saD DJ uye akazarura bhar uye nightclub muCaminha, kamuta kumadokero-kumaodzanyemba kwePortugal.
Vazhinji vaidavira kuti mutambi wechikwata aizobatana neManchester United paakabva kuMoaco, nekuda kwekubatana ne 'super-agent' Jorge Mendes - ane mutungamiri Jose Mourinho somumwe wevatengi vake. Guardiola akakunda hondo yeumwe munhu akamufadza panguva yeMonaco ya5-3 kurasikirwa mumugumo wokutanga weChampions League quarter-final clash.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Rimwechete kuruboshwe
Jorge Jesu weBenfica akazadza zvinhu zvikuru pachikwata chake. Asi kusvikira nhasi mafungu echikwata anoramba achinyanya kukosha pamusoro pokushayikwa kwekutenda mumatare emisha, naBernardo Silva zvinongorondedzerwa semuenzaniso wakanaka.
Haana kumbobvira atenda mutambi wechidiki. Kwemwaka, Jorge Jesu akabvumira Bernardo kutamba maminitsi 31 chete pamatatu matatu neboka rekutanga raBenfica. Bernardo Silva pachake achangobva kubvuma kuti pasi paJesu aive 'hapana tariro yekuputsana neBenfica', achiti: "Jorge paakandidzidzisa kuruboshwe kumashure kuBenfica ndakaona kuti ndakanga ndisina ramangwana mubhuki."
Benfica aiva kechikwata chaBernardo chaikoshesa mwoyo wake. Saka anodikanwa pamwoyo wake kuti ane chirevo chavo 'E Pluribus Unum' akazora mutsara paruoko rwake rworuboshwe. Kurota kwake navo kwakaparadzwa naJorge Jesu.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Mamwe Mazita, Saizvozvowo Rudzi rweMutambo, Shamwari Dzakanaka
Mutambi wemitambo akacherechedza paaisvika muguta kuti haazovi iye chete ndiye Silva pane maqembu. Vose vakava shamwari dzakanakisisa pavanoona kuti vane mazita akafanana neunhu uye unhu huri pamamiriro acho. Vose vane tsika yakasara-netsoka, ziso rekupfuura, nzvimbo yakaderera yekukuvadza uye unyanzvi hwekugadzirisa izvo zvakashungurudza zvidziviriro zvinopesana.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kurara neUngwaru
Bernardo Silva anotora nguva akarara pasi uye meso akavharwa kweawa imwe mushure mega yega yekurovedza muviri. Kuvandudza mano ako ekufungisisa uye ndeyekuita kweuchenjeri hwake pane iyo. Izvi zvinomuita mumwe wezvinyanzwisisiro zvepamberi munyika. Uchenjeri hwake hunoonekwa zvakare mumhinduro dzake dzakanaka uye dzakanaka kune vatapi venhau.
Bernardo Silva ave akaratidza shamwari yake yekambani yekambani yekukwanisa kuenderana nenyika itsva, mutauro mutsva uye tsika itsva. Anoshandiswa kuhutano hwekufamba. Kuronga nokukurumidza kuFrance panguva yakadaro yakangomwana kwakamubatsira kuti akure semunhu.
Nenguva isipi akadzidza Mutauro weChirungu asati afunga kuuya kuEngland. Bernardo akangwara uye kurara kwake shure kwekudzidziswa kunomupa kukwanisa kufunga nezvezvinodiwa uye nekudaro, "Ita hay pane zuva rinopenya".
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -League 1 Player wegore 2016-2017 Season
Izvi zvinofanira kunge zvakange zviri Silva, kunze kweEdinson Cavani, uyo akatora zita reLigue 1 Player wegore, asi akapa kuti Monaco ine nyeredzi dzakawanda, vhoti yavo ingangoparadzana. Uku ndiko kunzwisisa kubva chinangwa.
Pakati pevatambi vose vanobwinya paFrance kumaodzanyemba kwegungwa munguva iyi, kunyange zvakadaro, yaiva Mapurotende ndiyo yaiva yakanyanyogadzikana kwenguva yakareba yemushandirapamwe.
Yake yaimbova nhengo yekambani Fabinho yakapupura munaFebruary, 2017: "Iye angave ari nhengo inonyanya kukosha yeboka. Kuenzaniswa nezvikara zvakadai saRadamel Falcao uye Kylian Mbappe, mupiro wake unogona nyore nyore kukanganwa. Pashure pezvose, haasi mutambi ane nhamba dzinoshamisa. Saizvozvowo, haaiti saga, kuputika kana simba rekuda kwaBenjamin Mendy kana Tiemoue Bakayoko. Pandakasvika kuMonaco mu2014, ndakanga ndisingazivi kuti yaizoenda seizvi. Zvechokwadi, akauya seasingazivikanwi muFrance. Ini ndakasimudzwa ivo vakasaina mushure mechikamu chimwe chete neBenfica's senior squad. Nhasi, iye ava chimwe chinhu.
Bernardo Silva Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Iye ndiye Forever Kubwinya kuJardim
Bernardo Silva akabvuma kuti ane chikwereti chikuru Leonardo Jardim uyo akafanana sababa kuna iye kupfuura mudzidzisi wekare.
Mumashoko ake... "Somunhu, Jardim akandipa zvakawanda," Bernardo Silva anosimbisa. "Anoshanda zvakanaka nevatambi vaduku. Akaona ndiri muduku uye akandipa mukana. Musoro wangu, ndakanzwa zvakasiyana. Ndapfuurira mukati memwedzi ye3 chete yekubatana nebhulasi reFrance. "
Jadimimu akamuda zvakanyanya zvokuti akamuita nhamba yechizvarwa 10 mubhuki mushure mekutanga kumupa nhamba ye15 shirt. Chikonzero ndechokuti akayemura gumbo rake rakasara roruboshwe, kufamba kwake uye unyanzvi hwekuchera. Bernardo akaita mifananidzo ye 132 yeMonaco, achibatsira kambani kuenda kuLigue 1 musoro mu 2016 / 17.